आज विश्व दृष्टि दिवस, दृष्टि बिशेषज्ञद्धारा बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन, सरकारी उदासिनताप्रति दुख ब्याक्त - Bulletin Nepal
आज विश्व दृष्टि दिवस, दृष्टि बिशेषज्ञद्धारा बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन, सरकारी उदासिनताप्रति दुख ब्याक्त
असोज २६, बुटवल । आँखा स्वास्थ्य सबैका लागि, दृष्टिको महत्व बुझौ, भन्ने नाराका साथ आज नेपाल सहित संसारैभर विश्व दृष्टि दिवस मनाइदै छ । सन् १९९९ फेब्रुअरीमा दृष्टि २०२० कार्यक्रमको घोषणा गरी हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहीबारलाई विश्व दृष्टि दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
दृष्टि दिवसको अवसरमा नेपाल दृष्टि बिशेषज्ञ संघ प्रदेश नम्बर ५ ले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि नेपाल लगायत बिश्वभर रहेको न्यून दृष्टि र दृष्टिबिहिनताको समस्याको बारेमा जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा संघका सचिव डा. प्रभात जिसिले आखा रोग र उपचारको क्षेत्रका नेपाल सरकार उदासिन रहेको भन्दै प्रति दुख ब्याक्त गरे । आँखा निकै संवेदनसिल ज्ञानेन्द्रिय हुदा हुदै पनि यसमा हुनसक्ने संक्रमण रोकथाममा सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको आरोप छ । विश्वमा २८ करोड ५० लाख जनसख्या न्यून दृष्टि र ३ करोड ९० लाख मानिस दृष्टिबिहिन छन । सन १९८० / ८१ यता दृष्टि समस्याको बारेमा कुनै सर्बेहरु समेत हुन नसक्दा नेपालमा आँखा रोगको वास्तबिक अबस्था पनि एकिन हुन सकेको छैन ।
समान्य जनचेतनाको अभावका करण न्यून दृष्टि र दृष्टिबिहिनताको समस्या प्रत्येक बर्ष २० प्रतिसतले बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये अधिकांस समस्या मोतियाबिन्दुका कारणले हुने गरेको छ । नेपालमा हुने ६५ प्रतिसत न्यून दृष्टि र ८० प्रतिसत अन्धोपन ५० बर्ष नाघेकाहरुमा भेटिएको तथ्यांक डा. जिसिले प्रस्तुत गरे ।
दृष्टि बचाउका लागि के गर्ने ?
तथ्यांकलाई हेर्दा नेपाल जस्ता बिकासोन्मुख देशमा न्यून दृष्टि र दृष्टि बिहिनहरुको संख्या अधिकांस देखिएको छ । नेपालमा सन २०१० मा बिभिन्न संघसंस्थामा उपल्ब्ध तथ्यांकको आधारमा गरिएको सर्बेका आधारमा नेपालमा कुल जनसंख्याको सुन्य दशमलव ८४ प्रतिसत दृष्टिबिहिन रहेका छन । त्यस्तै २ लाख मानिसमा दृष्टि समस्या देखिएको छ जुन प्रत्येक बर्ष २० प्रतिसतले बढ्दो छ । हामीले सामान्य कुराहरुमा ध्यान नपुर्याउदा अर्थात सामान्य होसियारी र रोकथामका प्रयास नगर्दा आँखाको ज्याती संकटमा पारिरहेका हुन्छौ ।
कार्यक्रममा नेपाल दृष्टि बिशेषज्ञ संघ प्रदेश नम्बर ५ का अध्यक्ष डा. अमित केसिले बिद्यालय जानुपुर्ब बालबालिकाको आखा जाच गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । उनका अनुसार पढाइमा कमजोर भेटिएका मध्ये ४२ प्रतिसत बिद्यार्थीमा आँखाको समस्या भेटिने गरेको छ । दृष्टिमा समस्या भएकै कारण उनिहरु पढाईमा कमजार हुने गरेको उनको दाबी छ । प्रत्येक स्वास्थ मानिसले पनि बर्षको एक पटक आँखा परिक्षण गर्न जरुरी हुन्छ । केसिका अनुसार चस्मा लगाइरहेकाहरुले प्रत्येक ६ महिनामा एक पटक आँखा जाच गराईराख्नु पर्ने हुन्छ । साथै ब्लड प्रेसर र सुगरको औषधि खाइरहेका बिरामीहरुले पनि बर्षको एक पटक अनिवार्य आँखा परिक्षण गराउन केसिले सुझाब दिए । यदि सुगर र प्रेसर तलमाथि भइरहेको अबस्थामा प्रत्येक ६/६ महिनामै आखा जाच गराउनु पर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै बिभिन्न उद्योगमा काम गर्ने कामदार कृषि मजदुरहरुले कामको प्रकृति हेरिकन आखाको सुरक्षा गर्न बिशेषज्ञहरुले सल्लाह दिए ।
बजारमा पाइने सनग्लासको जथाभाबी प्रयोगले पनि आँखा असुरक्षित हुने उनीहरुको भनाई छ । सबै कालो चस्माहरुले सुर्यका परावैजनि किरणहरु नछेक्ने भन्दै पाबर नभएका चस्माहरु पनि परिक्षण गरेर मात्र लगाउन उनिहरुले सल्लाह दिए ।
बेलैमा उपचार गर्न सके प्रत्येक ५ जना अन्धोपन भएका मानिसमध्ये चारजनाको उपचार र रोकथाम सम्भव भएकाले रहेक ६–६ महिनामा आँखा जचाउनुपर्ने बिशेषज्ञहरुले बताए ।
मोतिविन्दु, आँखाको पर्दा जन्य रोगहरु, जलविन्दु, आँखाको नानीमा हुने अन्धोपना र दृष्टिदोषका कारण अन्धोपन हुने गरेको उनिहरुले भनाई छ । संघका अध्यक्ष दृष्टि बिशेषज्ञ डा. अमित केसिको अध्यक्षता, डा. डेकेन्द्र बोहोराको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा बिशेषज्ञ डाक्टरहरु अभिषेक पाण्डे, प्रभात जिसि, दिपेन्द्र बानिया लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।